कोरोनाविरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने विश्वका ५ महिलामा डा. रुना झा पनि छनोट – Everest Pati
काठमाडौं : कोरोना भाइरस ( कोभिड १९) को उपचारमा सक्रियरुपमा अग्रपंत्तिमा देखिएका पाँच महिलाको सूचीमा केन्द्रीय प्रयोगशालाकी निर्देशक डा रुना झा पनि छनोटमा पर्न सफल भएकी छन्। युएन उमनले कोरोना भाइरसको अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका विश्वका पाँच महिलाको सूचीअन्तर्गत जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रुना झालाई समावेश गरेको हो। संकटका बेला डा.झाले देखाएको कार्यकुशलता र सक्रियताको आधारमा डा झालाई शीर्ष पाँच महिलाको सूचीमा राखिएको बताइएको छ।
‘प्रयोगशालामा अबेरसम्म बस्नु सामान्य जस्तो भएको छ। प्राविधिक कामको साथै अतिरिक्त, यातायात र खानाको प्रबन्ध गर्ने जस्ता काम पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। चिकित्सकको टीमको ख्याल राख्नु झाको लागि उच्च प्राथमिकता हो। चीनको वुहानबाट ल्याइएको १ सय ७५ विद्यार्थीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। पहिलोपटक क्वारेन्टाइनमा प्रवेश गर्न उनको समूह थियो। उनीसँगै काजिकस्तान,चीन,जोर्डन,क्यारावियन अन्य महिला पनि समावेश भएका छन्।
२ लाख बढिले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ३४ लाख बढी संक्रमित छन् । यसको न्यूनीकरण र संक्रमितको उपचारमा विश्वभर लाखौं चिकित्सक खटिएका छन् । अहिलेको समयमा घर, परिवार र भाइरसको जोखिमको परवाह नगरिकन खटिएका चिकित्सकबाट झण्डै २ लाख निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।
त्रास यतिसम्म छ कि सामान्यतया स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमित व्यक्तिको उपचार गर्न त्यति सहजै तयार हुन सक्ने हिम्मत गर्दैनन् । चीनमा कोरोनाकै कारण स्वास्थ्यकर्मीको निधन समेत भएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण छ कि छैन भनेर स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोगशाला (ल्याब) मा ती व्यक्तिबाट संकलित नमूना परीक्षण गर्नुपर्छ ।
ल्याब परीक्षण विना कोरोना भाइरसबारे यकिन हुँदैन । हाल नेपालमा कोरोना भाइरस भए नभएको यकिन गर्ने विश्वासिलो स्थान बनेको छ – राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौं । त्यो ल्याबको नेतृत्वमा छिन, महिला चिकित्सक डा. रुना झा । उनै झा अहिले विश्वका पाँच महिलाको सूचीमा समावेश भएकी छन् । चीनको वुहान प्रान्तबाट उद्धार गरिएका १ सय ७५ जना नेपालीसहित अन्य व्यक्तिको स्वास्थ्य नमूना परीक्षण झाकै नेतृत्वको ल्याबमा भएको थियो ।
त्यसयता, हरेक दिन ७० भन्दा बढी स्वाबको परीक्षण झा नेतृत्वको टोलीले गर्दै आएको छ । धनुषाको हंशपुर नगरपालिकाको बघचौरा गाउँका धनञ्जय झाकी छोरी हुन् डा. रुना झा । पाकिस्तानबाट एमबीबीएस र नेपालकै इन्स्टिच्यूट अफ मेडिसिनबाट प्याथोलोजीमा एमडी गरेकी उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा लामो समय प्राध्यापन गरिन् ।
साढे ४ वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निजामती सेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर ११ औं तहमा नियुक्त भएकी थिइन् उनी । विगत १० महिनादेखि उनी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशक पदमा कार्यरत रहेर संस्थाको ‘हाकिम’को भूमिका सम्हालिरहेकी छन् । उत्कृष्ट पाँचमा पर्ने अन्य महिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघका फिल्ड एसिसटेन्टद्वय अमल अल महायरा र और हादेल दाबिबेह छन् । उनीहरु जोर्डनमा कार्यरत छन् ।
बामदेव गौतम पाल्पाबाट चुनाव लड्ने सहमति
सक्नेले आफैँ गर्ने र नसक्नेको उपचार सरकारले गर्ने भनिएकाे हाे, तर भ्रम फैलाइयो :…